Ra’iisul Wasaaraha Dalka Ciraaq oo ka badbaaday isku day dil oo lagu Qaarijin lahaa
HomeWararka MaantaRa’iisul Wasaaraha Dalka Ciraaq oo ka badbaaday isku day dil oo lagu Qaarijin lahaa
November 7, 2021 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Ra’iisul Wasaaraha waddanka Ciraaq Mustafa al-Kadhimi ayaa sheegay in isagoon wax dhibaata ah soo gaarin uu ka badbaaday weerrar lagu soo qaaday gurigiisa ku yaal magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in hoyga ra’iisul wasaaraha oo ku yaal aagga Green Zone-ka loo yaqaan lagu soo weerraray diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah ee drone-ka oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, arrintaas oo loo malaynayo inay tahay iskuday lagu khaarijin rabay.
Warar ay baahiyeen warbaahinta ayaa goor hore lagu sheegay in Mr al-Kadhimi loo qaaday isbitaalka.
Farriin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku baaqay in “la isdajiyo oo cidwalba la iska xakameeyo, iyadoo la eegayo danta dalka Ciraaq”.
Saraakiisha ayaa sheegay in lix qof oo ka tirsan ciidammada ilaalada ee ra’iisul wasaaraha lagu dhaacaway weerrarkaasi.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerrarka lagu qaaday goobtan ka tirsan magaalada caasamidda ah ee ay ku yaallaan dhismooyin badan oo kuwa dowladda ah iyo safaaradaha shisheeye.
Madaxweynaha Galmudug oo cafis u fidiyay sarkaal hub kala soo goostay Ahlusunna
is rasaaseyn ka dhacday Magaalada Garoowe oo Khasaaro Ka dhalatay